Ndụ ndị Naijiria: Ọ bụ eziokwu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndụ ndị Naijiria: Ọ bụ eziokwu?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ Na -eme Nigeria • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị agha Naijiria gbagburu ndị na-eme ngagharị iwe 56 dị ọcha. Terjọ tụrụ ụmụ amaala ma zoo n'ụlọ ha ma ọ bụ n'okporo ámá na-alụ ọgụ.
Otu tweet kwuru, sị: “Site taa, achọrọ m ịrịọ onye ọ bụla nọ ebe a. Ọ bụrụ na ị hụ onye ọbụla SARS / SWAT jidere gị, biko, kwusi hụ na ha anaraghị onye ahụ. Biko, gbakọọ ebe ahụ, dọba ụgbọ ala gị, ọ bụghị naanị ịnya ụgbọ ma ọ bụ ịgafe agafe. Biko, nyefee ya! #EndSARS . "
eTurboNews gwara Abigel, onye na-agụ akwụkwọ na Lagos. Ọ na-akọ, sị:
Ndị ntorobịa Legọs nọ na Naịjirịa na-eme ngagharị iwe megide arụrụala ndị uwe ojii na ajọ ọchịchị wee na-eji akara akara #EndSars #Endpolicebrutality #Endbadgovernance n'ime afọ iri gara aga na Naịjirịa. Ha kpọrọ gọọmentị ka ha kposaa ya, nke o mere, mana o nwere nsogbu ndị ọzọ e wutere ha nke ha wetakwara.
“Ndị omeiwu anyị bụ ndị kachasị akwụ ụgwọ n'ụwa, mana ha na-ahapụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere ike ịbara ụmụ amaala uru. Oké agụụ, ịda ogbenye, na enweghị ọrụ n'ala ahụ. Ọtụtụ okwu, ”Abigel kwuru.
Kedu ihe mere?
Ọ dịkarịa ala mmadụ 56 nwụrụ n'ofe Nigeria kemgbe #EndSARS Ngagharị iwe a bidoro n’abalị asatọ nke ọnwa Ọktoba, wee gbuo mmadụ 8 n’ofe mba ahụ n’ụbọchị Tuzdee naanị, dịka otu ndị na-ahụ maka oke ruru mmadụ bụ Amnesty International. Ọgbaaghara gara n’ihu n’ụbọchị Tọzdee mgbe mgbọ dara na mpaghara ndị ọgaranya bụ Ikoyi na Lagos.
Onyeisiala Naịjirịa, Muhammadu Buhari, akpọọla oku ka ngwụcha ngagharị iwe a na-eme megide mba ndị uwe ojii na-eme ihe ike mana ọ kpọtaghị aha mgbọ ogbugbu ndị na-eme udo.
Buhari kpọkuru ndị na-eme ngagharị iwe ka ha “guzogide ọnwụnwa nke ụfọdụ ndị okpuru ọchịchị na-eji na-akpata ọgbaghara.”
Abigel gara n'ihu sị: “N'ime usoro ngagharị iwe a, ndị agha Naịjirịa mepere egbe na-eto eto na-eme ngagharị iwe na ọtụtụ ndị gburu ma merụọ ahụ. Nke a emeela ugbu a ọdịda na ọgbaghara, ọkụ ọgbụgba, mgbukpọ, wdg.
“Enweghị mkpasu iwe.
“Ndị ntorobịa ahụ nọdụrụ ala na Lekki Tollgate na Lagos ebe ha gbakọtara maka izu 2 gara aga. Ka ha nọdụrụ ala, ha ji ọkọlọtọ obodo n’aka ha na-agụ abụ obodo, ma ndị agha ahụ mepere ha egbe.
“Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, enwere m mwute na nkpasasị.
“Onweghi onye a kpasuru iwe. Onweghi, enweghị ihe ọ bụla. A kposara ndị SARS nke ọma mana kama ịbụ ndị akọ na-ekwu okwu maka ihe achọrọ, FG guzobere uwe nchekwa ọzọ akpọrọ SWAT. N'ihi ya, ndị mmadụ chere, 'wow gịnị enweghi uche.' Nke ahụ kpasuru ụmụ amaala iwe. N'ihi ya, e nweela oke iwe na ụmụ amaala n'ihi ọchịchị ọjọọ na ọnọdụ ibi ndụ dara ogbenye. "
Onye isi oche ahụ gwara ndị mmegide okwu nke mbụ mgbe izu 2 gachara.
Edere ozi sitere na gburugburu Africa na Chatlọ Ọrụ Nkata Na-ahụ Maka Njem Nleta n'Africa gụnyere ozi sitere na Kenya na-asị:
Eguzoro m n'ịdị n'otu na ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwanyị Naijiria n'oge a siri ike n'oge. Afrịka na-eru uju ụmụ ya #endsars #Nigerianlivesmatter 🇳🇬🇳🇬🇳🇬
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Board of Tourism Board kwuru, sị:
“Anyị na-eguzo na ịdị n’otu na ndị obodo Nigeria. Obi anyị na ezinulo nke ndị ahụ tufuru ndụ ha, yana ọmịiko na ezi obi maka mgbake maka ndị merụrụ ahụ na ndị achụmnta ego ha ma kwakọrọ ihe ha.
"Anyị na-akpọ maka udo, ọkachasị maka ọnọdụ nke Nigeria nọ na kọntinenti ahụ ka Africa bidoro iwughachi, mepee ma malitekwa njem ndị njem."
E gbochiri igbu onwe COVID-19 maka nne na nwa